Goormuu diyaar noqonayaa tallaal la isku halleyn karo ee Faayraska Corona? - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaGoormuu diyaar noqonayaa tallaal la isku halleyn karo ee Faayraska Corona?
Goormuu diyaar noqonayaa tallaal la isku halleyn karo ee Faayraska Corona?
November 21, 2020 marqaan Wararka Maanta 0
Waxaa isasoo taraya warar farxad leh oo ku saabsan tallaalka faayraska corona, iyada oo tijaabooyin lagu guuleystayna durbadiba la shaaciyey.
Balse waxaa isweydiin leh tallaaka ugu wanaagsan kan uu yahay iyo sida uuu shaqeynayo?
Tallaal maxaan ugu baahanahay?
Dadka dunida ku nool badankood ayaa weli u nugul faayraska corona. Inkasta oo xayiraadaha dhawaan la soo rogay ay yihiin kuwa looga hortagayo dad badan iney cudurka u dhintaan.
Tallaalka wuxuu jirkeenna barayaa sida uu isaga difaaci karo faayraska corona, isla-markaana uu u joojin karo inuu qofka cudurka uu ku dhaco, ama ugu yaraan dhimashada cudurka uu sababo ay hoos u dhacdo.
Warka ugu weyn wuxuu soo baxay shirkadaha Pfizer/BioNtech marki ay shaaciyeen natiijada tijaabadoodi ugu horreysay ka soo baxday.
Waxay natiijada muujisay in ka badan 90% tallaaka la tijaabiyey inuu ka hortagayo qofka iney ka muuqdaan astaamaha Covid-19
UK oo keli ah dabayaaqada sanadkan waxay dalbatay 10 million oo ka mid ah tallaalkaasi
Tallalkanna waxaa loo qaataa laba xidhmo oo dhammeystiran oo ay midkiba seddex toddobaad u dhaxeyso
Dad ka badan 43,000 ayaa tallaalka la siiyey iyada oo aan la eegin badqabka tallaalkaasi uu leeyahay
Tallaalkan ay soo saareen shirkadaha Pfizer/BioNtech wuxuu u baahan yahay in lagu keydiyo qabow gaaraya -70C oo cabbirka heer kulka ah, laguna qaado gaari tallaagad leh oo baraf qallalan sido isla-markaana GPS lagula socdo.
Tallaalkan oo noociisu yahay mid cusub oo loo yaqaanno RNA, waxaa loo isticmaalay xaddi aad u yar oo ka mid ah hidda sidaha faayraska. Habkan cusub uu tallaalkan u dhisan yahay ayaa ah mid jirka ka caawineyso faayraska marka uu billowga horaba uu faayraska jirka soo galo inuu la dagaallamo sidaana uu uga hortago cudurka inuu jirka ku sii baaqi ahaado.
Tallaalka RNA weli looma ansixinin in dadka loo isticmaalo, balse waxaa horay looga isticmaali jiray dadka dawooyinka heer tijaaba maraya lagu tijaabiyo.
DAAWO:Xasan Cali Khayre oo Cabdiraxman cabdishakuur Raali Galin Siiyey Weerarkii Xukumadiisa Ku Qaaday Gurigiisa
DHAGAYSO:Dagaalka Itoobiya ee Tigrey-ga oo Soomali Diley Sameeyeyna Durba Soomaaliya